Warshadda Shiinaha Toos u Iibisa Hawo kulul oo Wareegaysa Qalajiyaha Warshadaha ee Qalajiyaha Mashiinka Doofaarka Jerky Qalajiyaha Cuntada Fuuq -baxa ee Iibinta Warshadaha iyo soo -saareyaasha | BOOD
Iibinta Tooska ah ee Warshadda Hawada kulul ee Wareejisa Qalajiyaha Warshadaha ee Qalajiyaha ee Mashiinka Qallajiya Mashiinka Mashiinka Cuntada
Hawo kulul oo Wareegaysa Warshadaha Qalajiyaha Cuntada Qalajiyaha Qalajiyaha Mashiinka Cuntada
Qalajinta waxay qaadataa naqshada marin haweedka bidix iyo midig, wareegga hawo kulul ee 3600, iyo nashqadda derbiga marawaxada labada dhinac, si loo hubiyo in gaadhigu u dhex mari karo lakabyada sare iyo hoose, mana jiro xagal dhintay. Qaybta dhexe waxay hubisaa jihada dabaysha, ma dhaafto dabaysha, maaddada si siman ayaa loo kululeeyaa, tayadana waa la dammaanad qaadayaa. Qolka qallajinta wuxuu ka samaysan yahay guddiga dahaarka ee polyurethane, iyo sanduuqa xiran ee lix-dhinac ah (saxanka hoose ayaa sidoo kale ah guddiga dahaarka polyurethane) wuxuu yareyn karaa kulaylka oo wuxuu badbaadin karaa kharashaadka hawlgalka.
U xisaabi sida waafaqsan naqshadda gogosha kasta ee qalajinta 500 kg, ku rid gaadhiga qolka qallajinta, oo naqshadee wadar ahaan 8 trolleys. Qoyaanka ugu horreeya ee qoyaanku waa qiyaastii 80%, iyo qoyaanka ka dib qalajinta ayaa qiyaastii ah 12%.
1. Tilmaan -bixinta Gawaarida waa 1.21 mitir oo dherer ah, 0.87 mitir oo ballac ah, iyo 1.85 mitir oo dherer ah; gaadhigu wuxuu ka samaysan yahay sariibado laba jibbaaran oo leh 16 lakab, baabuur kastana wuxuu hayaa ilaa 100 kg.
2. Qeexidda qolka qalajinta waa 6 mitir oo dherer ah, 4 mitir oo ballac ah, 2.2 mitir oo dherer ah, oo leh laba albaab.
3. Qalabka qalajinta ayaa dooranaya mid ka mid ah 15P qalajiyaha kuleylka tamarta hawo tamarta hawada, oo lagu qalabeeyay 16KW kaabayaal koronto oo loogu talagalay kuleylinta kaaliyaha marxaladda hore.
Shuruudaha bay'ada arjiga qalabka:
Shuruudaha awoodda: saddex waji shan-silig 380V ± 10% 50Hz ± 1%
Awoodda soo -gelinta la qiimeeyay ee korontada: ≤72.9KW
Heerkulka Heerkulka: 5 ~ 40 humidity Qoyaan qaraabo: ≤90%
Heerkulka heerkulka la xakameyn karo: 10 ~ 75 ℃ waa la hagaajin karaa
Hore: Cuntada ugu qaaska ah ee la isku habeeyey Colloid Mill Grinder Mill Colloid Mill ee Hilibka Iyo Looska
Xiga: Automatic Bag Granule Particle Grain Packer Packing Machine Hotel Hotel Sonkorta Cusbada Mashiinka Baakada Kafeega OEM ODM La Heli Karo
Fuuq -Feeraha Cuntada Iib
Mashiinka Qalajinta Cuntada
Qalajiyaha Cuntada Warshadaha
Secador de alimentos warshadaha
Cango / Cananaaska Vacuum Freez Warshadaha La Qalajiyay ...
Qalabka qalajinta Tamaandhada Cherry ee Tooska ah
Cunto Fudud oo Fudud Khudaarta Khudaarta
Caleenta CBD Fryer/Oil/Plant/Farm
Qudaarta Qudaarta Qudaarta ee Qudaarta Dehydrati ...
200L Warshadaha Jiifinta Kulaylka Kulaylka Kicinta ...